२०१५ सालको निर्वाचनले बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चुनेदेखि नै मुलुकमा र हाम्रा पार्टीहरूमा आवधिक निर्वाचन भएको भए आज हाम्रो मुलक कहाँ हुन्थ्यो? त्यही बेलादेखि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने परिपाटी बनाउन सकेको भए हाम्रो लोकतन्त्र कति समृद्ध हुन्थ्यो? निसन्देह हामी धेरै अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यौं। तर, त्यतिले मात्र हामीलाई पुग्थेन। हामी अक्सर नेता ठिक भएनन् भनेर दिक्दारिन्छौं, नेताहरू बेइमान भए भनेर अलाप गर्छौं। तर, एक जना नेता असल भएर मात्र देश बन्ने होइन।
लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको जिम्मेवारी हुन्छ– जे सम्भव छ त्यसका पछि लाग्ने हैन, जे आवश्यक छ त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने। गोविन्द केसीले सम्भव मात्र काम गर्न खोजेका भए दसपटकसम्म अनसन हुने थिएन, स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका अतिआवश्यक मुद्दा यति अगाडि आउने थिएनन्। लोकमानले नै सबैलाई कज्याउने हो भने हामी लोकतन्त्रका नागरिक हुनुको अर्थ रहने थिएन। लोकतन्त्रको केन्द्रमा राजनीतिक पार्टी हैन, नागरिक हुन्छन् भन्ने हामीलाई महशुस हुने थिएन। लोकतन्त्रका बारेमा जर्ज बनार्ड शाको एउटा मार्मिक भनाइ छ– ‘नागरिकहरू जतिका लागि लायक छन्, त्योभन्दा राम्ररी शासित नहोऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध नै लोकतन्त्र हो।’
शुक्रबार, मंसिर १७, २०७३ १६:०६:०६